eNasha.com - चुनाव जित्न नाङ्गै
चुनाव जित्न नाङ्गै
उनलाई चुनाव प्रचारमा निस्कँदा मुसुक्क हाँसिरहेको तश्वीरको पोष्टर टाँस्ने इच्छा भएन । यस्तो अवस्थामा अश्लील चलचित्रकी नायिका मिली अब्रासियोले के गर्लिन त ? पक्कै पनि उनले आफ्नो पेशालाई इमान्दारिताका साथ यस चुनावमा घुसाउँछिन् नै !
त्यसैले अहिले इटालीमा भइरहेको संसदीय चुनावमा उनको पोष्टरमा उनी होइन, उनको योनी छापिएको छ ।
उनले यसो चाहिँ उनका पुरुष प्रशंसकहरुलाई रिझाउन गरेको गरेको बताइएको छ । इटालीमा यौन प्रशाधनको ठूलो व्यापार हुने गरेको छ । खासगरी इर्टनल शहर त यौनका लागि संसारभर प्रख्यात छ ।
आफूले जितेको खण्डमा प्रख्यात भ्याटिकशन शहरदेखि केही किमि पर "प्रेम शहर" बसाल्ने योजना अघि सारेकी छिन् । जहाँ रेडलाइट क्षेत्र, स्ट्रीप क्लब, इरोटिक डिस्को तथा सेक्स पसलहरु बसाइने छ । उनका किस अफ द कोब्रा र पाओलिना बोर्गिज, इम्पेरियल निम्फोमानियाक जस्ता अश्लील चलचित्र निकै प्रख्यात भएका थिए ।
त्यसो त उमेरमा ४० नाघिसकेकी यी नायिका मात्र यौन उद्योगबाट सांसद हुने सपना साँच्ने पहिलो व्यक्ति होइनन् । यसअघि इटालीकै संसदमा पुग्ने अश्लील चलचित्रकी नायिका इओना स्टाकर, जसलाई सिसिओलिना भनेर पनि चिनिन्छ, ८० को दशकमा संसदमा पुगेकी थिइन् ।
कुनै अश्लील नायिका निर्वाचनमा उठ्नु मात्र पथ्र्यो, उनी छनोट हुने प्रबल सम्भावना थियो त्यो बेला तर अहिले समय पूरै परिवर्तन भएकाले नयाँ र सिर्जनात्मक काम नगरी मतदातालाई आकषिर्त गर्न नसकिने उनको विश्वास छ । त्यसैले उनले पोष्टरमा आफू मुस्काइरहेको तश्वीरभन्दा पनि योनीको तश्वीर राख्नु श्रेयस्कर ठानेको बताएकी छिन् ।
जन्मैदेखि राजनीति गरिरहेकाहरुले राजनीतिलाई प्रदूषित गरिसकेकाले नयाँ सोचका साथ आउने व्यक्तिलाई जनताले बरु रुचाउने उनले रोयर्टससँगको अन्तरवार्तामा बताइन् । उनले समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी छिन् ।
यता हालका प्रधानमन्त्री सिल्भियो बर्लुस्कोनीले यस पटकको चुनावमा सुन्दर महिलाहरुको सहभागिता बढी हुने घोषणामा उनको भनाइ थियो- "यो उनको वाहियात कुरा हो । किनभने उनले मजस्ती सुन्दर महिलालाई उनको पार्टीबाट उठ्न कुनै अनुरोध गरेनन् ।"
त्यसो त संसदमा गएपछि कानून बनाउने हो, न त उनले कानून पढेकी छिन् न त उनलाई यस सम्बन्धी केही नै थाहा छ । तर उनले एउटा अश्लील चलचित्रमा अभिनय चाहिँ गरेकी छिन्, जसमा उनी वकिल बनेकी छिन् । फिल्मको नाम थियो- एल ओनरेबल ।
इटालीमा हिजो चुनाव सम्पन्न भयो ।
सुन्दरी सेक्स माया सेलेब्रिटी गुगल भव्यता इन्टरनेट नग्नता बलिउड मूर्ख्याइँ विज्ञापन मुद्दा मामिला श्रीमानश्रीमती फट्याइँ कीर्तिमान परिस्थिति हलिउड उपाय उदेकलाग्दो उदारता